ngya pwee naw kya, aararshitwayko luu ko kinepyee hkaesaisharhpwaytwaeshi " pawmharahpuahkyahoet ko myoe nhang aatuu tait pite," rell hkyaote tar rein hcaaay Monahan satainn kwan hp ramhar k sosai . aasopar aahpyitaapyet aararshimyarrhkawso Monahan sai nhanganye, bh rwat k lainn shi luumyarr tait u ngwayasaynaat aahpyit hpawpyahtarrsaw aararko raimhaannluu 911 hponehkawsomhu laathkanrashi saeetaahkar5p.m. shae taw , shorly hcatainhkaesai . " sone kwalpyarr hkyarrnarrsaw 911 hkawso lammyarr pawtwin luu mhar k nywhaan pya nay tae saynaat twaynae luu t hpawpyahtarr par" hu suu k sosai . '' nhait u k laat paithkaatmhurauttaihkyet '' aararshimyarr aahkainnhpyitpwarrrar mhar routshi saeet aahkar suuthoet k hkawso suu k payy hpawpyahkyet kitenye m ae luu ko twaeshihkae partaal . " tararrhkan hthoetnout tait u nhait u mha laat paithkaatmhurauttaihkyet yuu. hkyain kaut aararshimyarr mhar aararwathtu htoutpya, bhaalsuuko nhaithku yuunehpaungg shi kyaeat," hu ၎innk pyawwsai . relltauthpwal say sone hkaerasai sawsuu sai i ngwayapite saalsaung hkaesai husosai . relltauthpwal say sone hkaerasai sawsuu sai i ngwayapite saalsaung hkaesai husosai . layy aararshimyarr luu ko sapatemhaout, ၎innthoeteat laatnaatmyarr sayyrone k sainn, Monahan k sosai . suuthoet k shuko pahtam u sone aakuuaanye payyhkaetaal nhaint suu say lwan saw suuthoetsai aasanhtwat hkaesai shirar sayyrone, shuko saalyuu phoetsaung raan luunar tain yarinabhhoet ko hkaw . nayuuyout relltauthpwal aararshimyarr tait u hcaung kyi kainmarar poneriutmyarr htotepyanhkaesai . nayuuyout relltauthpwal aararshimyarr tait u hcaung kyi kainmarar poneriutmyarr htotepyanhkaesai . " darhar kyanawthoet layyyout aararshimyarr aakyarr 10 kyaain paithkaat pawlarsai," Monahan k sosai . hkandharko kainmararmyarr waathtarr kyasai mahote suu aamaimasi aararshimyarr, aahkainnhpyitpwarrrar mhar sattu pite sharhpwaytwaeshi hkaesai . '' suu k kyinnar m ae yain kyaayyrae '' bh rwat k lainn nayhtinesuuaellrait Vassell sarrkaungsaisuueat 35 nhaitaarwal sarr, sar hele Vassell hkaekyaungg CNN k Affiliate NY1 shoetpyawwsai . relltauthpwal tait u hcaung kyi kainmararponeriutmyarr object taithku nhaint aatuu aararshimyarr mhar luu ko nywhaan pya pya s k pyawwpartaal . relltauthpwal tait u hcaung kyi kainmararponeriutmyarr object taithku nhaint aatuu aararshimyarr mhar luu ko nywhaan pya pya s k pyawwpartaal . suu k myaha m laatnaatmyarr nhaint hcatekyaw rawgar hkanhcarrhkaer suu k sosai . " suu k suu myoe ko hpw int, kaunggtae, yain kyaayy hpyitpartaal . suu k pell lar suu swarr," Vassell k sosai . myahoettawwaan bhelk de Blasio suu paithkaatmhu aapaw panarm shinnlainn laathkanrashi rae k sosai . aasoparaahpyitaapyet Sacramento aararshimyarr suuthoet tait u saynaat nywhaan pya hkaesai yonekyisaw suu tait u aarhparikaan aamayrikaan luu t u say sone raatsattapaat aakyaartwin htwatpawlarhkyinn hpyitsai . laatnaatmaatl 18 raatnaetwin Stephon Clark k ant paithkaatmhu aoutpar aahkainnhpyitpwarrrar mhar shar twae hkaesai bhaalsuu myaha m k sartae item selllhpone hkae sharhpwaytwaeshi, rell k pyawwpartaal . Clark k ant saathpyatmhu sandapyapwalmyarr nhaint rell pyupyinpyaungglellrayy myarraatwat hponehkawsomhu eat raatsattapaat pawhtwat shat shisai . paithkaatmhu eat parteaarr hkunhaittwin kaallehpoeneeyarr aamaatmyarr rellaararshi say hcay ninesaw aainaarr ko sone ninesai taeaahkar mhar k ant saat maallhoet sisisarsar pyaungglellmhu aasopyuhtarr . aasopar upadaykyamko relltauthpwal hkanmhunhaint Community karkwal hcaung shout rayy aaat upadayaahpyit luusimyarr sai .
suu k suuthoetmhar saynaat hpyithkaesai hu yonekyisaw aararko htoutpya pyeenout nayuuyoutmyahoet rellaararshi tait u aanaatraung luu ko paitsaat, aarnarpinemyarrk pyawwsai . paithkaatmhu buddhahuunae ny n payo
လက်နက်မတ်လ 18 ရက်နေ့တွင် Stephon Clark ကန့်ပစ်ခတ်မှုအောက်ပါအခင်းဖြစ်ပွားရာမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်ဘယ်သူမျှမကသာတဲ့ item ဆဲလ်ဖုန်းခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ရဲကပြောပါတယ်။ Clark ကန့်သတ်ဖြတ်မှုဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ရဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ရက်သတ္တပတ်ပေါ်ထွက်လျှက်ရှိသည်။
သူကပဲလာသူသွား," Vassell ကဆိုသည်။ မြို့တော်ဝန်ဘီလ်က de Blasio သူပစ်ခတ်မှုအပေါ်ပဏာမရှင်းလင်းလက်ခံရရှိရဲ့ကဆိုသည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက် Sacramento အရာရှိများသူတို့တစ်ဦးသေနတ်ညွှန်ပြခဲ့သည်ယုံကြည်သောသူတစ်ဦးအာဖရိကန်အမေရိကန်လူတဦးသေဆုံးရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
နယူးယောက်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများတစ်ဦးစောင့်ကြည့်ကင်မရာပုံရိပ်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာကျနော်တို့လေးယောက်အရာရှိများအကြား 10 ကြိမ်ပစ်ခတ်ပေါ်လာသည်," Monahan ကဆိုသည်။
သူကသူတို့မှာသေနတ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်သောအရာကိုထောက်ပြပြီးနောက်နယူးယောက်မြို့ရဲအရာရှိတစ်ဦးအနက်ရောင်လူကိုပစ်သတ်, အာဏာပိုင်များကပြောသည်။ ပစ်ခတ်မှုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနပေိုငျးပွီးနောကျ, အရာရှိတွေကိုလူကိုကိုင်ပြီးခဲ့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ "ပေါ်မှာအဖုအခြို့ကိုမျိုးနှင့်အတူတစ်ပိုက်," ရဲချုပ်တာရိန်းစအေ Monahan သတင်းကွန်ဖရမှာကဆိုသည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်အရာရှိများခေါ်ဆို Monahan သည်နှင့်အညီ, ဘရွတ်ကလင်းရှိလူများတစ်ဦးငွေအသေနတ်အဖြစ်ဖော်ပြထားသောအရာကိုရည်မှန်းလူ 911 ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံရရှိသည့်အခါ5p.m. ရှေ့တော်၌, shorly စတင်ခဲ့သည်။ "
သုံးကွဲပြားခြားနားသော 911 ခေါ်ဆိုလမ်းများပေါ်တွင်လူမှာကညွှန်ပြနေတဲ့သေနတ်တွေနဲ့လူတဖော်ပြထားပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ '' နှစ်ဦးကလက်ပစ်ခတ်မှုရပ်တည်ချက် '' အရာရှိများအခင်းဖြစ်ပွားရာမှာရောက်ရှိသည့်အခါသူတို့ကခေါ်ဆိုသူကပေးဖော်ပြချက်ကိုက်ညီမယ့်လူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "တရားခံထို့နောက်တစ်ဦးနှစ်ဦးမှလက်ပစ်ခတ်မှုရပ်တည်ချက် ယူ. ချဉ်းကပ်အရာရှိများမှာအရာဝတ္ထုထောက်ပြ, ဘယ်သူကိုနှစ်ခုယူနီဖောင်းရှိကြ၏," ဟု၎င်းကပြောသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သေဆုံးခဲ့ရသည်သောသူသည်ဤငွေအပိုက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သေဆုံးခဲ့ရသည်သောသူသည်ဤငွေအပိုက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ လေးအရာရှိများလူကိုသပိတ်မှောက်, ၎င်းတို့၏လက်နက်များဆေးရုံကဆင်း, Monahan ကဆိုသည်။ သူတို့ကသူ့ကိုပထမဦးဆုံးအကူအညီပေးခဲ့တယ်နှင့်သူသေလွန်သောသူတို့သည်အသံထွက်ခဲ့သည်ရှိရာဆေးရုံ, သူ့ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လူနာတင်ယာဉ်အဘို့ကိုခေါ်။ နယူးယောက်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများတစ်ဦးစောင့်ကြည့်ကင်မရာပုံရိပ်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာများဝတ်ထားကြသည်မဟုတ်သူအမည်မသိအရာရှိများ, အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာသတ္တုပိုက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ '' သူကကြင်နာမယ့်ယဉ်ကျေးရဲ့ '' ဘရွတ်ကလင်းနေထိုင်သူအဲရစ် Vassell သားကောင်သည်သူ၏ 35 နှစ်အရွယ်သား, ဆာဟီလီ Vassell ခဲ့ကြောင်း CNN က Affiliate NY1 သို့ပြောသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဦးစောင့်ကြည့်ကင်မရာပုံရိပ်များ object တစ်ခုနှင့်အတူအရာရှိများမှာလူကိုညွှန်ပြပြသကပြောပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဦးစောင့်ကြည့်ကင်မရာပုံရိပ်များ object တစ်ခုနှင့်အတူအရာရှိများမှာလူကိုညွှန်ပြပြသကပြောပါတယ်။ သူကမျှမလက်နက်များနှင့်စိတ်ကြွရောဂါခံစားခဲ့ရသူကဆိုသည်။ "သူကသူမျိုးကိုဖွင့်, ကောင်းတဲ့, ယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ်။
ပစ်ခတ်မှု၏ပါတီအားခုနှစ်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားအမတ်များရဲအရာရှိသေစေနိုင်သောအင်အားကိုသုံးနိုင်သည်တဲ့အခါမှာကန့်သတ်မယ်လို့သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုအဆိုပြုထား။ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ခံမှုနှင့် Community ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေအဖြစ်လူသိများသည်။